I-South African Airways: Iindiza ezisuka eRhawutini ziye eMauritius ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-South African Airways: Iindiza ezisuka eRhawutini ziye eMauritius ngoku
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba eziBalulekileyo eMauritius • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-South African Airways: Bhabha usuka eRhawutini uye eMauritius ngoku
I-SAA ngoku isondela kwinyanga yayo yokuqala yokusebenza ngeenqwelomoya ezivela eRhawutini ukuya eKapa nakwingingqi ukuya eAccra, Kinshasa, Harare naseLusaka. Inkonzo yemihla ngemihla yeMaputo iqala ngoDisemba 2021.
IMauritius inobudlelwane obuluqilima noMzantsi Afrika kwaye zombini yindawo ethandwayo yezokhenketho kunye neshishini.
Isicwangciso sendlela yeSAA sihlala sijongwa kwaye sivavanywa ngokungqinelana nesicwangciso sokuhlangula sasemva kweshishini sokuzinza kunye nokwenza inzuzo.
I-SAA iyakuvuyela ukuphinda iqale iinkonzo eMauritius, ngaphambili ebidumile kwaye inenzuzo.
I-South African Airways (SAA) iyaqhubeka nokwakha uthungelwano lwayo ngokuqala kwenkonzo eya eMauritius ukusukela nge-21 kaNovemba, 2021. Iinqwelomoya ziya kuqala zisebenze kabini ngeveki ngoLwesithathu nangeeCawa, zisuka IRhawuti ye-OR Tambo yamanye amazwe (i-ORTIA) ngo-09: 45 kusasa ngeenqwelo-moya ezibuyayo zisuka eMauritius ngo-04: 35 emva kwemini.
YeeHambo zoMoya yaseMzantsi Afrika Ingqonyela yethutyana uThomas Kgokolo uthi, “Inxalenye yesicwangciso-qhinga sokukhula kwethu kukuchonga iindlela apho kukho imfuno kwaye enokuba yinzuzo kulowo uphetheyo. Ukuqaliswa kwakhona kweenkonzo eMauritius kuyahlangabezana nazo zombini ezi ndlela. Ngapha koko, ilizwe linobudlelwane obuqinileyo noMzantsi Afrika kwaye zombini liyindawo ethandwayo yokhenketho kunye neshishini. Siqinisekile ukuba itikiti elizakuthathwa liza komelela, ngakumbi xa kusondela ixesha lehlobo. ”
SAA Ngoku isondela kwinyanga yokuqala yokusebenza kwayo kunye neenqwelomoya zalapha ekhaya ezivela kuJuyoruba ukuba Kapa nakwingingqi ukuya eAccra, Kinshasa, Harare naseLusaka. Inkonzo yemihla ngemihla yeMaputo iqala ngoDisemba ka-2021.
UKgokolo uthi isicwangciso sendlela sihlala sijongwa kwaye sivavanywe ngokuhambelana necebo lokuhlangula emva kweshishini lokuzinza kunye nokwenza inzuzo.
"Esi sisenzo esisengqiqweni esamkelwa ziinqwelomoya kwilizwe liphela ngenxa yemozulu enzima ishishini elizifumana likuyo. Kuxhomekeke ekuthabatheni ukuya kwiindawo ezikhoyo ngoku nalapho kukho imfuno yexesha elizayo, siza kongeza sithabathe iindlela."
UKgokolo utsho SAA kuyakuvuyela ukuphinda uqalise iinkonzo eMauritius, ngaphambili ebidumile kwaye inenzuzo.
Ixesha lokubhabha ukuya nokubuya elizweni lijikeleze iiyure ezine.